Pero: Fangalàrana Zava-Masina Tao Motupe · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Aogositra 2011 17:32 GMT
Fanavaozana (Alarobia faha 6 Jolay 2011): Ilay Hazo Fijaliana Masin'i Motupe dia hita ihany saingy tsy nisy an'ireo vatosoa intsony sady notapatapahana nizara dimy sy nisy faritra may ihany koa ilay izy.
Ny Talata 5 Jolay 2011, vaovao ratsy nahataitra no nifohazan'ireo Peroviana : nisy nangalatra ilay Hazo Fijaliana Masin'i Motupe [es] izay tena malaza be sy fanta-bahoaka tokoa.
Ilay Hazo Fijaliana Masin'i Motupe, avy ao amin'ny disitrikan'i Motupe ao amin'ny faritra Lambayeque, avaratr'i Peru, dia efa tany amin'ny 1860 tany. Ankalazana isan-taona isaky nyvolana Aogositra izy io, ka ny ilay hazo fijaliana no ivony, araka ny lovan-tsofina, dia namboarin'i Fray Juan Agustín de Abad, pretra Fransiskana.
Nisy niteny fa ilay pretra dia nandao tampoka sady tsy namela marika mihitsy izay lalàna nalehany. Nefa talohan'izay dia nampahafantatra tamin'olona maromaro izy fa ao Cerro Chalpón, Cerro Rajado sy Cerro Penachí, dia nametrahany hazo fijaliana goavana izay asan'ny tànany natao tamin'ny hazo guayacán [es] ; ireo hazo fijaliana ireo dia hita tao ary noraisina ho mpiaro ny faritra iray manontolo. Betsaka tokoa ireo olona sasa-poana niezaka mafy nitady ireo hazo fijaliana ireo.
Vavaka navela teo amin'ilay Hazo Fijaliana Masin'i Motupe . Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr, joestrada (CC BY-NC-ND 2.0).
Taona maromaro taty aoriana, ny 5 Aogositra 1868 dia nisy tanora iray, 22 taona, nantsoina hoe José Mercedes Anteparra Peralta nahita ilay Hazo Fijaliana Masina izay nafenina tany Cerro Chalpón, tao anaty karazana lavabato na zohy kely iray. Ny evekan'ny Trujillo dia nanendry an'i Anteparra ho mpiandraiki-draharaha voalohany tamin'izany, toerana izay notazoniny mandra-paha fatiny tamin'ny 10 Aprily 1921.
Toy izao no fomba fitatitr'ireo bilaogera ilay halatra.
Ny bilaogy Tu docente [es], an'ilay mpampianatra Jaime Quispe Casas, namerina namoaka ny an'ny La República [es] :
Ny Hazo Fijalian'i Motupe, zavatra iray nomen-kasina, ary najaina sy niankohofan'ireo paroasianina sy ireo mpanao fivahinianana masina tsy hoe ny avy any Lambayeque ihany fa ny avy amin'ny firenena iray manontolo, no very izy io alina io, talohan'ny hiposahan'ny maraina vao mangiran-dratsy. Tao Cerro Cruz de Chalpón no nisy azy io.
[…] mpangalatra vitsivitsy no tonga tao an-toerana ary, raha vao avy nanafika sy namatotra ireo mpiambina amin'ny alina, dia tsy nisalasala nanao ilay fanimbazimbàna.
José Zeña del Valle, blogera avy ao amin'ny Del Valle para todos [es], dia nanampy andinindininy :
Niaraka tamin'ny feon-dakolosy dia nandeha nankany amin'ilay zohy ao Chalpon ireo mponina ka nijery ny manodidina, manantena fa mety hitranga ny hoe natsipin'ireo mpangalatra any amin'ny iray amin'ireo hantsana lalina manodidina ny tendrombohitra Cerro Chalpón ilay zava-masina (nangalarina) rehefa avy naboridana sy nalaina ireo vato sarobidy taminy.
Io fitrangan-javatra io moa dia nanintona bebe kokoa ireo mpino Katolika ho amin'ilay Hazo Fijalian'i Motupe tao Chalpon, noho ny faha-25-n'ity volana ity hanamarika ny nanombohan'ny andron'ny mpiambina masina [mitambatra].
Ilay Hazo Fijaliana moa dia voarakotra volafotsy sy volamena fotsy ka izany no tena nahasarika ireo mpangalatra handroba azy.
Ao amin'ny Twitter, ny tenifototra #cruzdemotupe dia lasa lohateny malaza resahana be ao an-toerana. Ilay mpampiasa twitter, Aurelio Mata (@AurelioMatta) dia niteny :
Fa inona loatra no dikan'ity, nisy nangalatra ny @cruzdemotupe. Tsy aleon-dry zareo ny Kristy ao @gordovago no nangalarina [ mantsy ilay tsangambaton'i Jesosy Kristy napetraka vao haingana ary raisin'ny Filoha Peroviana Alan Garcia amin'ny fomba tsy misy fanajàna]
I Jorge Campos (@jorgelpotter) nandefa bitsika fa:
#cruzdemotupe setroka manakona? Ny finoana apetraka ety amin'ny sisiny, ny nangalarana ny #cruzdemotupe dia mampiseho fa tsy misy na inona na inona hajaina eto amin'ny firenena…
Kandy Fuentes (@kandydfg) dia nalahelo mafy raha nandre izany vaovao izany :
Tamin'ity taona ity aho no tsy mba afaka nandeha tany #cruzdemotupe mba hanatanteraka ny voadiko=( Ttena malahelo mafyv aho.
Ary i Alian Molina (@aliomp) niteny fa :
Ny Ben'ny tanàna ao Motupe miteny momba ilay halatra tao #cruzdemotupe: “Tsy marika fifampitolomana akory”.
Mikasika ilay halatra dia manambara amintsika ny bilaogy El Perú Rarará [es] fa :
Ny Komandin'ny PNP [National Peruvian Police], Alesandro León Roque, miantsoroka ny fanadihadiana, dia nangataka faharetana. “Mangataka anareo mpanao gazety aho mba hanam-paharetana amin'o raharaha io, mbola mijanona ho tsiambaratelo ny fanadihadiana. Koa sitrako indrindra raha mba mitony ianareo, aleo izay hanao ny asanay ”, hoy izy niteny entitra.
Indrisy anefa fa tsy io ihany no fangalarana zava-masina nitranga tao Perou tato anatin'ny volana vitsy. Ohatra fotsiny ny tamin'ny Oktobra lasa teo, i M. Antonio Agapito Manco, avy ao amin'ny bilaogy Poder Político [es], dia nandefa fa :
Volamena lafovidy no nanamboarana ny alitaran'ny LORD OF THE MIRACLES (na ny Tompon'ny Fahagagàna), miaraka aminà fitaovana mitentinm-bidy US$ 30,000, izay fandraisana anjara avy amin'ireo vahoaka vontom-pinoana sy ny mpifanolo-bodirindrina, ary novidiana tamin'ny alalan'ny hetsika sosialy sy hetsika ara-pivavahana maro.